News Feed Archives | Page 14 of 41 | Frontier Myanmar
ကမ္ဘာ့ဒေသပေါင်း ၁၂၀ တွင် ဆိုင်ခွဲပေါင်း ၃၀၀ ခန့် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် မွန်ဂိုးလီးယားဟော့ပေါ့ဆိုင်ခွဲကို ရန်ကုန်မြို့တွင် မတ် ၈ ရက်နေ့က စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်က မွန်ဂိုးလီးယားအတွင်းပိုင်းတွင် စတင်တည်ဆောင်ခဲ့သည့် Little Sheep ဟော့ပေါ့သည် ၎င်း၏ အထင်ကရဟင်းရည်ကြောင့် နာမည်ကြီးလူသိများသည်ဟု သိရသည်။ ၎င်းကို.
M9 ၌ စီးပွားဖြစ်ထွက်ရှိနိုင်မည့် အလားအလာနှစ်ခု တွေ့ရှိထားဟု ပီတီတီအီးပီ ထုတ်ပြန်
မြန်မာ့ကမ်းလွန်တွင် ဇောတိကစီမံကိန်းအား လုပ်ဆောင်နေသည့် ပီတီတီအီးပီက လုပ်ကွက် M9 တွင် စီးပွားဖြစ်ထွက်ရှိနိုင်မည့်အလားအလာနှစ်ခု ထပ်မံတွေ့ရှိထားသည်ဟု မတ် ၇ ရက်နေ့တွင် ကြေညာသည်။ ပီတီတီ ရေနံရှာဖွေရေးနှင့် တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ (ပီတီတီအီးပီ) ၏ လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သည့် ပီတီတီအီးပီ မြန်မာ့စီမံကိန်းက ထိုလုပ်ကွက်တွင် အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ချက်တစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယင်းဆန်းစစ်ချက်တွင် လုပ်ကွက်.
အလားအလာကောင်းများရှိသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရန် အတိုင်ပင်ခံ ဖိတ်ခေါ်
မြန်မာနိုင်ငံ၌ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုပွင့်လန်းလာချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ စီးပွားရေးအလားအလာများကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ထုတ်ဖော်အသုံးမချနိုင်သေးသဖြင့် လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ “တာဝန်ယူရှိမှုရှိပြီး ကောင်းမွန်စွာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မယ့် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများက နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအနာဂတ် အလားအလာဖော်ဆောင်ရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းကြောင်းဆီ တွန်းတင်ရန်အတွက်.